Cookies bụ faịlụ na-echekwara na kọmputa mgbe a website na-enweta iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ na ikwu na peeji a na-gara. Ọ na-na--ahụ kwuru na kuki anapụta ahụmahụ dị ka faịlụ na-azọpụta jidesie usoro na maka otu ihe nkesa ma ọ bụ n'ime ime obodo usoro ịnweta ọdịnaya na nchọgharị akụkọ ihe mere na na usoro. Kuki bu faịlụ a na-ahụkarị maka ma color nakwa dị ka desktop na a nkuzi bụ ihe niile banyere kuki na iPhone na ha na mwepụ na-eme ka n'aka na nchọgharị bụ nchebe na ala.
Gịnị na-eme kuki na iPhone?
E nwere ọtụtụ ihe na-eme ka n'aka na kuki na-kere na-echekwara na na usoro. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere na-metụtara echiche:
Ọ bụ ihe kasị nkịtị onu nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ahụmahụ na na internet. Iji mee ka a eme fọrọ nke nta niile weebụsaịtị nke ụwa na-ahụ na kuki na-azọpụta jidesie na ngwaọrụ na browses ha website. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ọ na-eme nchọgharị akụkọ ihe mere eme na-ehichapụ iji jide n'aka na nke nke kuki a na-kpebiri mgbe oge nchọgharị kwusiri.
On otu aka na weebụsaịtị na-ahụ na kuki na-kere jidesie usoro ma ọ bụ na-kwuru na niile weebụsaịtị abụghị otu na Ya mere iwu nke na-achịkwa iwu na ụkpụrụ bụ isi ọrụ nke na-eme n'aka na ma a kuki a ga-kere ma ọ bụ. Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe usoro nke na-eke kuki iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ọdịnaya na akara na ihe ndị a chọrọ na-emekwa ka n'aka na ahaziri ọdịnaya a na-egosipụta na-ịchọgharịrị na ya.
Ọ bụkwa otu n'ime ihe na-ekwe ka ngwaọrụ nakwa dị ka website ike kuki jidesie usoro na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe ike ma ọ bụ gbanyụọ kuki nke mere na nzuzo nwere ike na-echebe. Ọ na-e kwuru n'ihi na eziokwu na n'oge gara aga kuki akpata ya iduga otutu esemokwu na maka otu ihe ahụ ọrụ ndị ọzọ banyere nke a echiche mgbe ọ na-abịa kuki. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ga-esi na online Nkuzi iji jide n'aka na Safari nke bụ isi nchọgharị nke iPhone na-ahazi iji jide n'aka na kuki na-mgbe kere.
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ ọmụma nkekọrịta bụkwa ihe echiche nke na-eduga kuki e kere eke na na website. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nke a echiche na-mgbe ụfọdụ iji mee ka n'aka na nna Nche nakwa dị ka n'ozuzu echiche nke agbachitere na-echebe na ya mere ọ na-eji ndị agha nakwa dị ka ọgụgụ isi mara ụma na-eme ka n'aka na mba ọdịmma na-echebe na nke a.
1 pịa ikpochapụ kuki na gị iPhone
Wondershare SafeEraser bụ otu nke kasị mma na mmemme iji jide n'aka na kuki ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ data na onye ọrụ na-achọ na-ehichapụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe nzuzo e nyere na chebekwara n'otu oge. E nwere ogologo ndepụta nke isi atụmatụ nke usoro ihe omume na-esonụ na-ụfọdụ isi ihe ndị a ga-atụle n'isiokwu na-mmekọrita ka usoro ihe omume nke dị n'okpuru ajụjụ.
Na-esonụ bụ ụfọdụ isi ihe nke na-egosi na otú bara uru a mmemme dị ka ọ na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a:
The ehichapụ faịlụ na-adịghị ehichapụ na-adịgide adịgide dị ka ha bụ recoverable ma ọ bụrụ na omenala ụzọ na-eji. Usoro ihe omume na-eme ka n'aka na faịlụ na-ehichapụ ozugbo na ihe niile.
Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ na-ere, inye ma ọ bụ nanị ahapụ ochie ngwaọrụ mgbe ahụ a usoro aka eme ka n'aka na ngwaọrụ na-ehichapụ na-adịgide adịgide na-enweghị Chọpụta nke ochie ndekọ
Kuki na onwe data nhichapụ bụkwa ihe na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume na-eme ka n'aka na data nzuzo na-eguzosi ike n'ezi na-mgbe na-echebe.
The junk faịlụ nwekwara jiri iPhone na a usoro na-ahụ na faịlụ na-ehichapụ na nke kacha mma ahụmahụ na-nyere ka ọrụ.
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ikpochapụ kuki na iPhone
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ:
1. Download na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị mbụ. Isi ihuenyo ga na-gbapụta mgbe ngwaọrụ a ghọtara na e jikọọ na usoro:
2.The ihichapu onwe data button bụ mgbe ahụ na-enwe iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ngwaọrụ scanning na na nke ọzọ window Pop elu:
3.The ngwaọrụ ga-ahụ ga nyochaa na onye ọrụ nwere ike ịhụ ihe niile faịlụ, nchekwa na kuki egosipụta:
4.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe ndekọ nke na-achọ nhichapụ họrọ na usoro Ọganihu mgbe ihichapu ugbu a button na-enwe:
5.The okwu ihichapụ bụ na-mesịa na ihichapu ugbu a button bụ na-enwe n'ihu:
6.The ọrụ na onye ga-ahụ window sụgharịa na data e ehichapụ na-adịgide adịgide:
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Kọwaa kuki na iPhone